Izindawo ezishisayo eSeoul
Inani eliphansi: $ 0.0
I-Korea Tour Agency
Uhambo Olunye Losuku
I-Multi Day Tour (i-2 ~ 5 Izinsuku)
I-Multi Day Tour (i-6 ~ 13 Izinsuku)
Ukuvakasha okwenziwe ngokwezifiso
Inkonzo yokuqhutshwa kwenhlangano yaseKorea
Ukuhamba kwehhotela + Isikhumulo sezindiza
Ukuthi uye kuphi?
Cishe ujwayelene namagama u-Itaewon, Myeongdong noma uHongdae, kepha ingabe uyazi ukuthi hlobo luni lwezinto ongazenza kulezi zindawo? Uzothola kule ncazelo yebhulogi nemisebenzi yezindawo ezidume kakhulu nezishisa kakhulu eSeoul! Ngakho-ke, noma ukuhlala kwakho eSeoul kufushane, ungakwazi ukukhetha ukuthi yiziphi izindawo ofuna ukuzihambela nokuthi yiziphi izinto ofuna ukuzenza lapho!
I-Hongdae iyindawo eshisa kakhulu yabantu abasha abavakashela eSeoul. Le ndawo yabafundi iseduze naseHongik University futhi ungathatha ongaphansi komhlaba, umugqa 2 ukuze uvakashele le ndawo eshisa kakhulu. Uzothola izinto eziningi ongazenza, kusukela uyothenga uye karaoke, udla ukudla okumnandi ezindaweni zokudlela, ezivame ukuthengwa kakhulu. Esikhathini esiningi, uzothola ithuba lokusiza kubhasi noma bukhoma abadansi ngokwenza ezinye izingxoxo ezimnandi ezingomeni ze-kpop. Le ndawo yaziswa kakhulu phakathi kwezivakashi kodwa futhi naphakathi kwabaseKorea. Ungahamba ekukhanyeni kwemini noma ebusuku, uzohlala uthola izinto ezithokozisayo ongazenza.
Kepha i-Itaewon, le ndawo iyindawo eshisa kakhulu eSeoul futhi nangaphezulu ngemuva kokuphinda kudlalwe ngengoma ephumelelayo ye- "Itaewon Class" eyethe izivakashi eziningi endaweni. I-Itaewon yisifunda samazwe lapho ungathola khona izindawo zokudlela ezivela kuwo wonke umhlaba, ukuhlangana kwamasiko nezinkolo. Ngempela ungathola mosque waseSeoul e-Itaewon, uzungezwe nezitolo nezindawo zokudlela ezi-halal. Kepha ngaphezu kwakho konke, i-Itaewon idume ngokuhlanganyela emidlalweni yamaqembu. Ngempela kukhona amathani wemigoqo, amakilabhu kanye nama-karaoke. Kungakho lesifunda sithandwa kangaka ngabezinye izizwe nabaseKorea.
IMyeongdong Yindawo ekufanele uhambe ngayo uma uhlela ukuyothenga futhi ulethe izikhumbuzo kanye nezipho zabangane bakho nomndeni wakho. Ngokwemvelo, ungathola konke okudingayo lapho nokuningi! Futhi kubathandi bezimonyo leli yipharadesi lakho, ngoba bangamakhulu omkhiqizo abasuka kwabaziwa kakhulu kwabaziwa kakhulu. Yuzothola konke okudingayo. Futhi ingxenye enhle kunazo zonke, ukuthi kunokudla komgwaqo okukuzungezile! Ungakujabulela ukuthenga ngenkathi udla ukudla okulula kwaseKorea ongakaze uzame ngaphambili, njenge-Egg Bread noma iTornado Potato.
IGangnam ngokwempela isho 'eningizimu yomfula, njengoba itholakala ngaphansi komfula iHan. IGangnam yisikhungo semfashini, i-chic nesanamuhla seoul egcwele i-Seoul kufaka phakathi okuthenga, izindawo zokudlela kanye nezikebhe zezikebhe. IGangnam idume kakhulu kubathandi bezitolo. Ungathola omkhulu ezitolo ezinkulu ezinjenge COEX, namalebula wokuqamba aphezulu. Uma unentshisekelo ngomculo waseKorea (K-pop), ungathola ama-ejensi ambalwa we-Kpop afana neBighit Entertainment, i-SM Town, iJYP Entertainment… Ebusuku abantu kule ndawo futhi bamatasa kakhulu futhi banomdlandla ngama-nightclub nama-bar asebusuku, okwenza le ndawo ibe yindawo indawo enhle yokudansa futhi ujabulele impilo kuze kuse!
IHana River nezindawo ezizungezile zitholakala enkabeni yeSeoul ehlukanisa leli dolobha ngo-2. Yindawo edumile yezakhamizi zenhloko-dolobha. Le ndawo ngempela iluhlobo lokuya lapho uhamba ngaphandle kwesidingo sokuhlela uhambo lwakho kusengaphambili. Ungaphumula futhi ujabulele isikhathi esihle nomndeni wakho, abangane nabathandekayo kumapaki ambalwa azungezile. Okwe-oabantu abafuna ukwedlula i-adrenaline rush, ungayijabulela imidlalo yezamanzi noma ukugibela ibhayisekili eceleni komfula. Ngaphandle kwalokho, uma ulamba kancane ungavunyelwe ukuletha ukudla kwakho endleleni!
Isifunda sase-Insadong, esisenkabeni yedolobha laseSeoul, waziwa kakhulu phakathi kwabafokazi ngezitolo zayo eziningi kanye nezindawo zokudlela. Ngaphezu kwakho konke kuyaziwa ngemigwaqo yayo nesimo sezulu esihlangene esingokomlando nesanamuhla ongasithola lapho. Yindawo ehlukile yeSeoul efanekisela ngempela okwedlule kweNingizimu Korea. Esiqintini sesifunda i-Insadong, ungathola izigodlo ezivela enkathini kaJoseon. Ubuciko bunendawo enhle e-Insadong. Imibukiso eminingi bonisa zonke izinhlobo zobuciko ezisukela ekupendweni kwendabuko kuya ezigebengwini zingatholakala yonke indawo. Futhi-ke, izindlu zamtiye zamtiye kanye nezindawo zokudlela kuyizindawo ezifanele ukuqeda ukuvakasha kwalesi sifunda ..
Ibhalwe nguSoukaina Alaoui noCaillebotte Laura
Ungahlukıselana Ne FacebookUngahlukıselana Ne Facebook EphathwayoUngahlukıselana Twitter Ungahlukıselana Ne WhatsappUngahlukıselana Ne Whatsapp Pin itUngahlukıselana Ne Pinterest Ungahlukıselana Ne LinkedInUngahlukıselana Ne LinkedIn
Igama * I-imeyili * Iwebhusayithi
I-Etourism co., L
UMongameli: U-Lee Hee
Reg. Inombolo: 105-87-73167
Ucingo: + 82-2-323-6850
Ikheli: 2001, 5, i-Petran digital 1-ro, 2001, Geumcheon-gu, Seoul
Copyright © 2018-2020 Etourism. Wonke amalungelo agodliwe ⠀⠀ / ⠀⠀ Izithombe zitholwa yi-KTO (Korea Tourism Organisation).